Yini ongayinika intombazane evela kumapulangwe
Noma yikuphi abazali ababhekana nombuzo ofanayo, yini okufanele banikeze ingane yabo. Kusuka kwamanzi angasese angasese angenawo unobtrusive. Uma umfana ethanda ukunambitheka okuqhubekayo, khona-ke anganika imimoya yamafutha. I-spray anti-spray noma i-antiperspirant ingaba isipho esihle. Isipho esihle sizoba i-gel ngaphambi nangemva kokushefa nokushefa i-foam, kanye ne-gel noma i-gel yokugeza. Uma ingane ithanda izinwele zezinwele ezahlukene, khona-ke ingakwazi ukunikeza i-gel nge-flavour yezinwele ze-styling.
Ukhilimu womzimba omuhle kuyoba isipho esihle kuye. Futhi ungathenga isethi enamakha noma ukuyiqoqa ngokwakho, kuyoba ngemuva kokushefa i-gel, ukuphunga i-foam nokumboza ubuso obumnandi obuname ubuso.
Khetha i-perfume ibhizinisi eliyinkimbinkimbi ngempela. Ungafunda mayelana nezintandokazi zomuntu osemusha, yiziphi izingubo zakhe ezithandayo futhi ngosizo lomthengisi ukuthi athathe into efana nayo, kodwa akukho okuqinisekisayo ukuthi amafutha angathandwa. Noma, ezimweni ezimbi kakhulu, mthengeni amafutha ayisebenzisayo.
Ngentombazane yentsha, ungathenga ikhadi lesipho lezimonyo namafutha noma isitifiketi sesipho se-SPA zokwelapha noma ukusikhipha. Lolu khetho luyinqobe yokuwina, ukuthenga isipho sokuzalwa kwentombazane esencane.
Izwe le-parfumery likhulu kakhulu futhi lihlukile futhi ungalahleka uma ukhetha iphunga elifanele. Intombazane encane izosondelwa yi-aromasive flower-fruit aromas engavamile, izithelo ze-citrus ezimibalabala nezitshalo ezilula. Kusukela kumaphuzu amasha ongakunikela ngawo ungakwazi ukunikeza i-Lanvin Eclat d`Arpege namuhla ehamba phambili futhi ethandwayo kakhulu, futhi kusukela ezincwadini ezintsha zakamuva amanzi angasese yangasese Pure Life Woman. Kusukela ku-novelties zakudala ungathenga iphunga eliphansi elingabizi kusuka ku-Sergio Tacchini - uDonna.
Zisebenzise lawa macebiso bese uthatha iphunga elifanele lezingane.
Omama omncane eRussia
Uma ingane iphuza utshwala
Ama-comrades esikoleni angcono abafundisi kunabantwana, ngoba abanenhlanhla
Umhlangano womzali: izidakamizwa nezingane
Indlela yokuhlukanisa ukuphila komuntu osemusha
Isizungu sezingane, izimbangela zesizungu nemiphumela yayo
Isifiso sokwenza umsebenzi, ukufeza impumelelo yomuntu siqu
Kanjani ekhaya ukukhulisa isitshalo esiyingqayizivele?
Indlela yokufundisa ingane embizeni, izeluleko zengqondo
Ukushisa kwesimo sezulu kanye namanzi olwandle eSochi - Okthoba 2017 - Ukubikezelwa kusukela kwi-Hydrometeorological Center
I-Tortelli ene-ithanga ne-ricotta
Amanzi okugeza emakhaya
Ingabe isinkwa esiyidla siyingozi?
Indlela yokuphumula Ngonyaka Omusha-2016
I-Physiology - ama-hormone obulili besifazane
UFiliphu Kirkorov uhlongoze uVictoria Lopyreva
Yiziphi izandiso nendlela yokubhekana nazo?
Indlela yokufundisa ingane ukuba igqoke yedwa?
Izambatho ze-Princess Diana zizobekwa endalini, izithombe ezingavamile
Imvubelo incike ekudleni
Pie neklabishi namakhowe